သရုပ်ဆောင်နန္ဒာလှိုင် ရဲ့ မောင် စိန်ဖြိုးလှိုင် (သရုပ်ဆောင်နာမည် မောင် ) ဆီက ချစ်သူ ရီရီ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး မကြားစဖူး စကားထူးတွေ (၅)ကြိမ်ထိကြားလိုက်ရလို့ ဦးဇေသီဟ ထင်မှတ်မထားပဲ အံ့အားသင့်သွားရတာက-။ – Shwe Ba
ကဲ- ပရိသတ်ကြီးရေ အကယ်ဒမီ နန္ဒာလှိုင်ကတော့ ခင်ပွန်းကောင်း ကို ပိုင်ဆိုင်ထားရလို့ အရမ်းကို ကံကောင်းတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက် ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ နန္ဒာလှိုင်ရဲ့ မိသားစုဘဝလေးက သာယာ ချမ်းမြေ့တာကြောင့် ပရိသတ်အများအပြားက အားကျချစ်ခင်နေကြ တာဖြစ်ပါတယ်။
ဦးဇေသီဟ ကလည်း ချစ်ဇနီးချောလေး ကို အရမ်းချစ်လွန်းလို့ စိတ်ချမ်းသာအောင် ထားပေးပြီး ပြောသမျှစကားတွေ ကိုလည်း နားထောင်ပေးပါ တယ်နော်။နန္ဒာလှိုင် တို့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက် က စိတ်တူကိုယ်တူနဲ့ ပေါင်းသင်းနေထိုင် လာကြတာ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာမြင့်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။
နန္ဒာလှိုင်က အနုပညာ အလုပ်တွေကို လုံးဝရပ် နားထားပြီး သူမ မိသားစုကို သာအချိန်ပြည့် ဂရုစိုက်ပေးနေ တာဖြစ်ပါတယ် ။ နန္ဒာလှိုင်ရဲ့မောင်လေး စိန်ဖြိုးလှိုင်ကတော့ေယာက်ဖဖြစ်သူ ဦးဇေသီဟ နဲ့ အလုပ်တွေ အတူတူလုပ်ကိုင်ပြီး အရမ်းစည်းလုံးကြ တာဖြစ်ပါတယ်။
ဦးဇေသီဟ ကလည်း စိန်စိန့်ကို အမြဲဆေးထိုးပြီး စနောက်တတ်လို့ သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ဆက်ဆံရေးကို ပရိသတ်တွေ ကလည်း သဘောကျနေကြတာဖြစ်ပါတယ်နော်။ အခုဆိုရင်လည်း ဦးဇေသီသက စိန်စိန့် ကို ထပ်ပြီး ဆေးထိုးလိုက်သေး တာဖြစ်ပါတယ်။
ဦးဇေသီဟက ”စိန်ဖြိုးဆီက တစ်ခါမှ မကြားဖူးတဲ့ စကား … ဒီနေ့ ၄ ကြိမ်ပြောတာ နားထောင်လိုက်ရတယ်။ သူမင်္ဂလာဆောင်ရင် ဘယ်လို ပြင်ဆင်မယ် ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲ ပြောနေတယ်…. နီးနေပြီ ထင်ပါတယ်။
“လို့ ဆိုပြီး ယောက်ဖဖြစ် သူရဲ့ပြောစကားကို လူမှုကွန်ယက်ပေါ်မှာ အမှတ်တရအနေနဲ့ တင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေကလည်း စိန်စိန်နဲ့ရီရီ့ကို အရမ်းသဘောတူကြလို့ မြန်မြန်လက်ထပ်ဖို့ တိုက်တွန်းနေကြ တာဖြစ်ပါတယ်။ ကဲ…နောက်ဆုံးတော့ စိန်ဖြိုးနဲ့ ရီရီ တို့ချစ်သူနှစ်ယောက်ရဲ့ မင်္ဂလာရက်မြတ်လေး ကို ရောက်ရှိလို့လာပါ‌တော့ မယ်နော် ။
ကဲ- ပရိသတ္ႀကီးေရ အကယ္ဒမီ နႏၵာလွိုင္ကေတာ့ ခင္ပြန္းေကာင္း ကို ပိုင္ဆိုင္ထားရလို႔ အရမ္းကို ကံေကာင္းတဲ့ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ ပဲျဖစ္ပါတယ္ေနာ္။ နႏၵာလွိုင္ရဲ့ မိသားစုဘဝေလးက သာယာ ခ်မ္းေျမ့တာေၾကာင့္ ပရိသတ္အမ်ားအျပားက အားက်ခ်စ္ခင္ေနၾက တာျဖစ္ပါတယ္။
ဦးေဇသီဟ ကလည္း ခ်စ္ဇနီးေခ်ာေလး ကို အရမ္းခ်စ္လြန္းလို႔ စိတ္ခ်မ္းသာေအာင္ ထားေပးၿပီး ေျပာသမၽွစကားေတြ ကိုလည္း နားေထာင္ေပးပါ တယ္ေနာ္။နႏၵာလွိုင္ တို႔ဇနီးေမာင္ႏွံႏွစ္ေယာက္ က စိတ္တူကိုယ္တူနဲ႔ ေပါင္းသင္းေနထိုင္ လာၾကတာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာျမင့္ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။
နႏၵာလွိုင္က အႏုပညာ အလုပ္ေတြကို လုံးဝရပ္ နားထားၿပီး သူမ မိသားစုကို သာအခ်ိန္ျပည့္ ဂ႐ုစိုက္ေပးေန တာျဖစ္ပါတယ္ ။ နႏၵာလွိုင္ရဲ့ေမာင္ေလး စိန္ၿဖိဳးလွိုင္ကေတာ့ေယာက္ဖျဖစ္သူ ဦးေဇသီဟ နဲ႔ အလုပ္ေတြ အတူတူလုပ္ကိုင္ၿပီး အရမ္းစည္းလုံးၾက တာျဖစ္ပါတယ္။
ဦးေဇသီဟ ကလည္း စိန္စိန႔္ကို အျမဲေဆးထိုးၿပီး စေနာက္တတ္လို႔ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ရဲ့ ဆက္ဆံေရးကို ပရိသတ္ေတြ ကလည္း သေဘာက်ေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္ေနာ္။ အခုဆိုရင္လည္း ဦးေဇသီသက စိန္စိန႔္ ကို ထပ္ၿပီး ေဆးထိုးလိုက္ေသး တာျဖစ္ပါတယ္။
ဦးေဇသီဟက ”စိန္ၿဖိဳးဆီက တစ္ခါမွ မၾကားဖူးတဲ့ စကား … ဒီေန႔ ၄ ႀကိမ္ေျပာတာ နားေထာင္လိုက္ရတယ္။ သူမဂၤလာေဆာင္ရင္ ဘယ္လို ျပင္ဆင္မယ္ ဆိုတဲ့အေၾကာင္းပဲ ေျပာေနတယ္…. နီးေနၿပီ ထင္ပါတယ္။
“လို႔ ဆိုၿပီး ေယာက္ဖျဖစ္ သူရဲ့ေျပာစကားကို လူမႈကြန္ယက္ေပၚမွာ အမွတ္တရအေနနဲ႔ တင္လိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။ ပရိသတ္ေတြကလည္း စိန္စိန္နဲ႔ရီရီ့ကို အရမ္းသေဘာတူၾကလို႔ ျမန္ျမန္လက္ထပ္ဖို႔ တိုက္တြန္းေနၾက တာျဖစ္ပါတယ္။ ကဲ…ေနာက္ဆုံးေတာ့ စိန္ၿဖိဳးနဲ႔ ရီရီ တို႔ခ်စ္သူႏွစ္ေယာက္ရဲ့ မဂၤလာရက္ျမတ္ေလး ကို ေရာက္ရွိလို႔လာပါ‌ေတာ့ မယ္ေနာ္ ။
Previous post PROJECT K အဖွဲ့ကတော့ ကမ္ဘာကျော် kpop အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ iKON နဲ့တွေ့ဆုံပြီး ထူးခြားတဲ့ ဘယ်လိုစကားတွေပြောလိုက်သလဲ-
Next post စေတနာ ရောက်ပြန်ဟပ်တဲ့ အခမဲ့ဆေးကုပေးတဲ့အကျိုး ဘုရားတည်ဖို့ အဘိုးတန်ရတနာပစ္စည်းတွေ သူ့ကိုပေးလှူဒါန်းလို့ကြည်နူးပီတိဖြစ်ရတဲ့ ထူးခန့်ကျော်